I-Apple cider uviniga we-cholesterol ukuthi ungayithatha kanjani > Ukwelashwa okuhlukile
I-Apple cider uviniga ukwehlisa i-cholesterol noshukela
Iminyaka eminingi engaphumelelanga ekulweni neCHOLESTEROL?
Inhloko Yesikhungo: “Uyokumangaza ukuthi kulula kanjani ukwehlisa i-cholesterol ngokumane uyithathe nsuku zonke.
I-cholesterol ibaluleke kakhulu emzimbeni womuntu. Kubandakanyeka ekwakhekeni kwama-hormone, ama-bile acid, amavithamini D, aqinisekisa ukusebenza kahle kwamasosha wezinzwa nokuzivikela komzimba. Ukwanda kwe-cholesterol yegazi (hyperlipidemia) kuholela ekuphazamisweni kwezinqubo ezijwayelekile zomzimba. Ungawehlisa kanjani i-cholesterol yegazi ngaphandle kokusebenzisa izidakamizwa? Amakhambi we-Folk okwehlisa i-cholesterol ayindlela ephumelelayo yokwenza izinga lakhona lifane.
Amakhambi e-Folk ekwelapheni i-cholesterol ephezulu
Amathiphu nezinye iziphuzo
Ukusetshenziswa kwamakhambi abantu kwe-cholesterol ephezulu kunezinzuzo eziningana. Okokuqala, amakhambi okwelapha neminye imikhiqizo empeleni akunaziphikiso. Okwesibili, ukuncishiswa kwe-cholesterol enemithi yesintu kuvunyelwe ukuhlanganiswa nokwelashwa kwezidakamizwa.
Emzimbeni womuntu, i-cholesterol ibhekisela kuma-lipoproteins. Kunezinhlobo eziningi ze-lipoproteins:
I-High Density Lipoproteins (HDL).
I-Low Density Lipoproteins (LDL).
I-lipoproteins ephansi kakhulu (VLDL).
I-LDL ne-VLDL zithathwa njenge-cholesterol “embi”. Ukwanda ngokuqondile kwalawa maqembu kuholela ekwakhekeni kwamakhemikhali e-cholesterol, okwandisa ingozi yokuthola isifo senhliziyo (coronary senhliziyo) kanye ne-atherosclerosis. Ukusuka ku-cholesterol eyingozi, ingozi yesifo senhliziyo nayo iyakhuphuka. I-HDL ibhekwa njenge-cholesterol “enhle”. Banikeza ukuthutha kwama-lipoprotein kusuka kumaseli kuya esibindini, kuvimbela ubungozi be-thromboembolic pathologies.
Amazinga e-cholesterol ajwayelekile ahluka ngenani leminyaka, kanye nobulili bomuntu.
Imvamisa, i-cholesterol kowesifazane ophilile ingu-2.2-6.19 mmol / L. Izinga elijwayelekile le-LDL lingu-3.5 mmol / L, i-HDL ingu-0.9-1.9 mmol / L.
Kumadoda aphilile, amazinga e-cholesterol ajwayelekile aqala ku-3.6 kuya ku-5.2 mmol / L. Imvelo ye-LDL ingu-2.25-4.82 mmol / L, i-HDL ingu-0.7-1.7 mmol / L.
Izimbangela ze-cholesterol ephezulu yegazi yilezi zinto ezilandelayo:
Ukudla okungenampilo (ukudla ukudla okugcwele amafutha ezilwane).
Izimo ezicindezela njalo.
Ukukhuluphala ngokweqile noma ukukhuluphala.
Ukwephulwa kwe-metabolism yamafutha (dyslipidemia).
Izinguquko ezilinganisweni ze-hormonal egazini labesifazane ngesikhathi sokukhulelwa nokukhishwa komzimba (leli qiniso lihambisana nokukhiqizwa okwandayo kwe-progesterone emzimbeni wowesifazane).
Isikhathi sokuyeka ukuya esikhathini, i-postmenopause.
Ukwazi ukuthi wehlise kanjani i-cholesterol ephezulu enamakhambi abantu, izimbangela zayo kanye nezinketho zokuyiqeda, unganciphisa kakhulu ingozi yokuthola i-hemorrhagic stroke, isifo senhliziyo, ne-atherosclerosis.
Ungawehlisa kanjani i-cholesterol yegazi? Lokhu kungatholakala ngokusebenzisa izindlela zokwelapha ezingezona izidakamizwa nezidakamizwa.
Imithi yokunciphisa cholesterol ihlukaniswe ngamaqembu ama-4:
Izikhathi zokuhlukaniswa kwama-bile acid ("Colestipol", "Cholestyramine").
Ukulungiselela kweNicotinic acid (izakhiwo zamavithamini D3, PP).
Ama-Fibrate (Atromid, Miskleron).
Ukunikezwa kwezidakamizwa, kanye nosayizi wemithamo yazo, kwenziwa kuphela ngudokotela ohambelayo.
Ekugcineni, sizoxoxa ngokuthi sinciphisa kanjani i-cholesterol ngamakhambi esintu. Ngokungangabazeki, enye yezindlela ezisebenzayo zokwelapha ezingezona izidakamizwa ekulweni ne-cholesterol ngomuthi wendabuko. Ukudla okusetshenziselwa ukulwa ne-cholesterol, empeleni, yi-statin yemvelo. Ibuyisela ukulingana kwe-cholesterol enhle nokubi.
Ukudla okusetshenziselwa ukwehlisa i-LDL:
Izinhlanzi ezinamafutha zingasiza ekususeni i-LDL egazini. Lokhu ku-herring, i-salmon, i-tuna, i-flounder. Okuthandwayo kunikezwa ezinhlobonhlobo zasemanzini.
Amantongomane nembewu: ama-pistachios, ama-alimondi, ama-walnuts, imbewu yesame, ama-sunflower, amathanga. Banomphumela omuhle ekwehliseni i-cholesterol.
Amafutha emifino yi-ejenti enhle yokunciphisa i-cholesterol - soya, i-sesame, ummbila. Kunconywa ukuba kwenziwe amasaladi.
Izithelo ezintsha, imifino - ezindaweni zokuqala kukhona amagilebhisi abomvu, ukwatapheya, iklabishi, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi. Le mikhiqizo isetshenziswa ngempumelelo ukwehlisa i-cholesterol.
Izimila nazo zithinta ukwehliswa kwe-cholesterol. Ungapheka ngokufakwa kukaphaza oluhlaza, ubhontshisi.
Ezinye izincomo zokunamathela ekunakekelweni kwe-anticholesterolemic:
Khipha inyama enamafutha ekudleni, unogwaja, inyama yenkukhu yamukelekile.
Khawulela umthamo usawoti ongadluli ku-5 g / ngosuku.
Ukudla kufanele kudliwe kaningi (izikhathi ezingama-5-6 / ngosuku) ngezingxenye ezincane.
Kunconywa ukusebenzisa imikhiqizo efaka inani elifanele lamavithamini kanye namaminerali. Izitsha zinconywa ukuthi zibiliswe, zibiwe, kuhhavini.
Izithako: I-1 isanqante, uhhafu wegilebhisi, ama-walnuts ama-2, u-30 ml woju, i-kefir noma iyogathi. Indlela yokulungiselela: gaya zonke izithako. Akunconywa ukususa ifilimu kusuka kugrapefruit. Faka ukugqoka kwakho okuthandayo bese uxuba.
Izithako: Ama-prunes omisiwe ama-10 ama-pcs, i-apula eli-1, ulamula noma ujusi we-orange. Indlela yokulungiselela: ubilise bese usika izithelo zama-prunes, ugcobe i-apula, engeza ujusi owuthandayo, hlanganisa.
Izithako: 1 kg kabhontshisi oluhlaza, utamatisi ama-2, ama-clove wegalikhi ayi-2, uwoyela wemifino, uviniga we-apple cider, amakhambi nosawoti ukunambitha. Indlela yokulungiselela: ubilise ubhontshisi, inkathi ngososo (3 tbsp. Imifino enamafutha + 2 tbsp. I-Apple cider uviniga). Faka ugarliki nosikiwe ngaphambili, usawoti, amakhambi, hlanganisa.
Izithako: amaqabunga ama-5 we-dandelion entsha, isigamu ikhukhamba, imifino noma uwoyela womnqumo. Indlela yokulungiselela: thatha amashidi pre-ofakwe of dandelion, Chop. Sika ikhukhamba, hlanganisa izingcezu, engeza uwoyela owuthandayo. Usawoti awunconywa.
Kukhona namanye amakhambi abalulekile we-cholesterol:
Ukusetshenziswa kwezithelo ezintsha nemifino kuyasiza ngoba aqukethe amavithamini ahlukahlukene kanye nenani elilinganayo le-fiber. Lokhu kwakhiwa kusiza ukuqeda i-cholesterol. Ijusi elisanda kufakwa lingalungiswa kusuka kumikhiqizo elandelayo:
Uma ufisa, ungaxuba amajusi, engeza amaconsi ambalwa kalamula kalamula. Lokhu kwelashwa kungenziwa ngezinjongo zokuvimbela.
Ukufakwa komhluzi kanye nomhluzi we-coniferous kulwa kahle ngamazinga aphezulu we-LDL. Peel bese usika kahle ulamula 2, bese ufaka ama-500 ml omhluzi we-coniferous. Sebenzisa izikhathi ezi-3-4 / ngosuku lwendebe eyi-1⁄2.
Ukufakwa kwe-morbidity kunezindawo ezinhle zokuphulukisa. 15 g. Subpestilence (1 tbsp. L.) Thela izingilazi ezimbili zamanzi abilayo, imizuzu imizuzu engu-120 ngaphezulu kokushisa okuphansi. Okulandelayo, udinga ukuvikela isiphuzo esiphumela amahora angama-1.5-2 ekushiseni kwama-degrees angama-22- 24. Hlikihla umhluzi. Sebenzisa u-1 tbsp. l Izikhathi ezi-2 / usuku, inkambo yokwelashwa iyizinsuku ezingama-30.
Ukufakwa kwamadevu wegolide. Thela amashidi ambalwa wesitshalo esingama-20 cm ubude ngamanzi ashisayo, ake ume ubusuku obubodwa. Bese usebenzisa u-1 tbsp. Izikhathi ezi-3 / usuku ngaphambi kokudla. Inkambo yokwelashwa izinyanga ezintathu. Ukufakwa kumele kuqandwe.
Ukumiliselwa kweqabunga le-Blackberry. Thatha ama-10 g amaqabunga, uthele ama-200 ml wamanzi abilayo. Shiya ihora elingu-1. Ukumiliselwa okuphumayo kunconywa ukuthi kusetshenziswe usuku lonke.
Ukufakwa kwegalikhi kulamula. Gaya ugalikhi ne-lime (1 pc.). Thela 500 ml wamanzi apholile, shiya isonto lonke, ngezikhathi ezithile uzamazama. Ukufakwa okuxinzekile ukuphuza i-25 ml izikhathi ezi-3 / ngosuku ngaphambi kokudla ukudla, kuvunyelwe ukungeza uju ukunambitha.
Cwecwa ama-clove ambalwa egalikhi bese ufaka i-250 g ye-vodka kubo. Faka endaweni emnyama amasonto amabili. I-tincture okuholela idliwe ku-30 ​​ml. Izikhathi ezi-3 / usuku ngaphambi kokudla ukudla, ukukufaka ebisini.
Thela i-rosehip eyomile esitsheni se-0.5 l, uyigcwalise phezulu, bese uthelela u-40% utshwala. Phikelela amasonto amabili, ngezikhathi ezithile uzamazama. Dla ama-15 wehla isikhathi esingu-1 / usuku, uwadonsa kucezu ushukela olucwengiwe.
Ukulungele (kuthengwe ekhemisi) i-10% tincture kufanele ichithwe ngamaconsi ayi-15 ngaphambi kokudla izikhathi ezintathu / ngosuku.
Ungenza i-tincture ngezandla zakho ngale ndlela elandelayo: thela i-20 g yepropolis ku-500 g ye-vodka. Vumela ukuma isonto elilodwa endaweni emnyama. Phuza ku-dilution yamaconsi ayi-10 nge-30 ml yamanzi kathathu ngosuku ngaphambi kokudla. Inkambo yokwamukelwa izinyanga eziyi-3-4.
I-Hawthorn ne-mistletoe mhlophe. Faka 3 tbsp. l izimbali ze-hawthorn ezivela ku-1, 5 tbsp. l i-mistletoe emhlophe. Hlanganisa i-30 g yeqoqo ne-250 ml yamanzi abilayo. Shiya usuku. Sebenzisa 100-150 ml izikhathi ezi-3 / ngosuku.
Iminduze yesigodi, i-lemon balm, i-goose cinquefoil, utshani be-rue. Hlanganisa 1 tbsp. l ingxenye yezimbali zeminduze yomndeni wesigodi, 2 tbsp. l i-lemon balm, 3 tbsp. l cinquefoil nezimpande zemifino. Hlanganisa i-15 g yeqoqo ne-200 ml yamanzi apholile, bese kuthi ngemuva kwamahora angama-4, imizuzu engu-3 yehora ngaphezulu kokushisa okuphansi, nzima. Phuza ama-50 ml izikhathi ezi-4 / ngosuku.
Ama-rosehip, ama-raspberries, amashidi we-nettle, i-clover, izimbali ze-hawthorn ne-chestnut. Shintsha zonke izakhi, uthathe ngamunye we-1 tbsp. L. Ngendebe eyodwa yamanzi ashisayo xuba i-15 g yeqoqo. Shiya imizuzu engama-60, bese unamba. Sebenzisa 50 ml 1 isikhathi / usuku.
I-Buckthorn bark, i-rose okhalweni, izimbali ze-dieelle kanye ne-hawthorn, i-orthosiphon. Thatha ama-30 g we-sihlahla sivame ukutholakala, isithombo sasendle esingasasebenziyo, i-15 g ye-hawthorn ne-orthosiphon, i-15 g (1 tbsp.) Kwingxube ephumayo, uthele u-200 ml wamanzi abilayo. Fudumele kubhavu wamanzi imizuzu engama-40. Bese unitha futhi udle izikhathi ezi-3 / ngosuku ezingama-50-70 ml.
I-Chokeberry, yarrow, izimpande ze-dandelion nezikolweni, amaqabunga e-birch, amahashi. Hlanganisa zonke izakhi, uthathe u-1 tbsp ngamunye. l., 15 g yengxube athulule amanzi angama-200-250 mm, abese imizuzu engama-60. Sebenzisa izikhathi ezi-3 / ngosuku ezingama-70 ml amaviki angama-8 kuya kwayi-12.
Itiye eliluhlaza ngenye indlela enhle yokuqeda i-LDL.
Itiye leLinden lisiza ukunciphisa i-LDL. Ukulungiswa kwe-200-250 ml yetiye kuqukethe ukuthulula izipuni ze-1-2 zezimbali ze-linden engilazini yamanzi abilayo. Ngemuva kwalokho shiya isigamu sehora.
Amanzi amaminerali azosiza bobabili ukuqeda i-cholesterol embi futhi kwandise i-cholesterol enhle.
Nge-beet kvass, ungangehlisa ne-cholesterol. Ukuze upheke, udinga ama-500 g ama-beet, isinkwa se-rye noma isinkwa esimnyama, i-100 g ushukela owenziwe ngeso lokhozi.
Indlela yokulungiselela: ama-beet asikiwe, isinkwa esivele sibunjiwe. Faka konke embizeni engu-3-litha, ukumboza ngoshukela bese uthele amanzi abilisiwe. Shiya izinsuku ezintathu. Thatha ingilazi eyi-3 izikhathi / ngosuku.
Ngemuva kokutadisha konke lokhu okuphekwe ngaphezulu, ungafinyelela esiphethweni esilandelayo: ukwelashwa okungeyona elula futhi “okumnandi kakhulu” okungeyona yezidakamizwa ye-cholesterol ephezulu kungukuphuza ujusi, ngoba ukungamakhambi okwenziwe ngamakhambi akuwona ukunambitheka kwawo wonke umuntu. Kodwa-ke, kufanelekile ukuqaphela ukuthi umuthi we-herbal (ukwelashwa ngamakhambi), ngocwaningo, uyasebenza kakhulu. Kepha ukusetshenziswa kwamakhambi okwelapha kunezinkinga zako: ezinye iziguli zinenkinga yokungezwani komzimba ngamakhambi athile - leli qiniso alivumeli bonke abantu ukuthi belashwe ngemithi ye-herbal. Ngakho-ke, ngaphambi kokukhetha ukuthi yiziphi izindlela zokulwa ne-hypercholesterolemia, kunconywa ukubonana nochwepheshe. Kepha, nganoma yikuphi ukukhetha, izinga le-cholesterol egazini ngamakhambi abantu lincipha kahle.
Ukwelashwa kwe-cholesterol ngemithi yesintu kusebenza njengenye indlela enhle kakhulu yemithi. Kodwa unganikezeli ezindleleni zesintu zokwelapha ngokungalawulwa - udinga okungenani kanye ngonyaka ukunquma izinga le-cholesterol egazini, ngoba ukwehla ngokweqile nakho kungaholela emiphumeleni emibi.
Ungayithatha kanjani uviniga we-apple cider we-cholesterol?
I-Apple cider uviniga yikhambi lasendulo elaziwa ngomthelela omuhle emzimbeni womuntu. Abaphilisi baseNdiya yasendulo nabaseGibhithe lasendulo basho izinto eziningi ezizuzisayo zikaviniga emibhalweni yabo. Ngalezo zinsuku, umuthi wawusetshenziswa njenge-ejenti yokwelapha yonke, isebenza kuzo zonke izinhlobo zezifo. Ukusetshenziswa okubanzi okunjalo kuhlangene neqiniso lokuthi ngisho ngaleso sikhathi abantu babazi ukuthi uviniga usiza ukukhulisa ukuhamba kwegazi kwizitho ezahlukahlukene futhi kuthuthukisa ukuhamba kwegazi.
I-Apple cider uviniga yenziwa ngokuxovula i-apula le-apula. Ngenxa yale nqubo, kwakheka i-apple cider equkethe utshwala, okuthi, ngemuva kokusebenzisana kotshwala ne-oksijini, iguqulwe i-acetic acid.
Umzimba womuntu ukhiqiza into ekhethekile edingekayo ekusebenzeni kwayo okujwayelekile kanye nokusebenza kwayo - cholesterol Inani elithile le-cholesterol liyadingeka ukugcina isimo sempilo samaseli emzimbeni, ukukhiqizwa kwamahomoni ahlukahlukene asekela ukusebenza okujwayelekile kwezindlala nezitho zomzimba. I-cholesterol iyinhlangano eyakhiwe, i-polycyclic liprosilic yemvelo engokwemvelo, equkethe ulwelwesi lwazo zonke izinto eziphilayo.
Kunezinhlobo ezimbili ze-cholesterol:
Kubi - low density lipoprotein (LDL), ehlala ezindongeni zemithambo yegazi futhi ivimbele ukuphuma kwegazi okujwayelekile ngayo,
Okuhle ukuphakama kwe-lipoprotein (HDL). Ukuhlushwa kwayo kunconywa ukuthi ikhuphuke ngangokunokwenzeka. Kuyasiza ukususa i-cholesterol engafuneki.
Ubufakazi obuqinisekisa ukwehla kwe-cholesterol yegazi lapho kuthatha uviniga yimiphumela yocwaningo oluningi olwenziwa emazweni ehlukene omhlaba. Enye yazo, eyenziwa eKorea ebantwini, iveze ukuthi ukudla njalo izithasiselo zokudla kanye noviniga izinyanga eziningi kuvamile izinga lamafutha egazi, ahlanganisa i-cholesterol, futhi kunciphisa nezinga lokuhlangana okuvuvukala komsuka ohlukahlukene kubantu abakhuluphele.
Lokhu kungenxa yokuthi i-apple pectin, okuyi-fiber encibilikayo ekhona ku-apple cider uviniga, inyibilikisa amafutha kanye ne-cholesterol. Kuyasiza ukuqeda lezi zinto ezingafuneki futhi kusiza ukwehlisa izinga labo.
Emzimbeni womuntu, esinye sezitho ezibaluleke kakhulu ezibhekele ukwelashwa kwama-metabolism isibindi. Ezimweni lapho ukudla kwabantu kungasekelwa ndawonye njengoba kunesidingo, inzuzo yesisindo iyenzeka. I-Apple cider uviniga isiza ukuguqula isibindi ngokwejwayelekile futhi iyabandakanyeka ekugayweni kokudla okunamafutha. Ngenxa yalokhu, i-metabolism yamaprotheni, amafutha nezinye izinto ezikhona ekudleni kuyasheshiswa.
Izinzuzo ze-apple cider uviniga
Ngenxa yokuthi uviniga wenziwe ngama-apula, unesibalo esikhulu sezimpawu eziwusizo. Inama-acid acid wesitshalo (i-oxalic, i-citric, i-malic), amavithamini, ama-enzymes nezakhi zamaminerali.
Ngenxa ye-pectin, u-apple cider uviniga wehlisa i-cholesterol ngenkuthalo, futhi ama-antioxidants aqinisa amaseli nemithambo yethoni.
Ukusetshenziswa njalo kwe-apple cider uviniga kusiza ekuqothuleni amafutha kanye nama-carbohydrate, okuholela ekwandeni kwezinqubo ze-metabolic emzimbeni, ukwehla kokudla, okwenza kube lula kakhulu ukwehlisa isisindo, ususe ubuthi futhi uhlanze amaseli kuzo zonke izinhlobo zezinto ezinobuthi, futhi uqinise ukungatheleleki.
Futhi, i-apple cider uviniga isiza ukuthuthukisa ukubukeka nokwelula ubusha besikhumba, ukulwa nezifo ezahlukahlukene, ikakhulukazi isifo sikashukela i-mellitus.
Lokhu kungenxa yamandla kaviniga ukwehlisa izinga le-glucose egazini lomuntu.
Izindlela zokusebenzisa i-apple cider uviniga we-cholesterol
Kunezindlela eziningi zokwelapha i-hypercholesterolemia nge-apple cider uviniga. Abadume kakhulu yilaba abalandelayo:
Ukusetshenziswa nsuku zonke kwesipuni sikaviniga, kufakwe engilazini yamanzi. Lokhu kumele kwenziwe ngaphambi kokudla kokuqala,
Ukusetshenziswa kokufakwa koviniga noju. Ukuze wenze lokhu, isipuni somkhiqizo ngamunye sifakwa engilazini yamanzi futhi siphuze esiswini esingenalutho,
Sebenzisa ama-tincture kagalikhi noviniga. Ukuze upheke, udinga cishe amagremu angama-50 kagalikhi oqoshiwe, othelwa nge-100 ml kaviniga. Kuyadingeka ukugcizelela ezitsheni ezivalekile okungenani izinsuku ezintathu. Phuza amaconsi ayi-10 kathathu ngosuku, uwafaka kwisipuni samanzi. Inkambo yokwelashwa izinsuku eziyi-15,
Ukusetshenziswa kukaviniga nge-valerian. Ukuze wenze lokhu, engilazini ye-apple cider uviniga ,gcizelela i-spoonful yezimpande ze-valerian ezichotshoziwe (izinsuku ezi-3). Thatha okufanayo ne-tincture ngegalikhi. Lokhu kumnika, ngaphezu kokulwa ne-cholesterol, kuthuthukisa ukusebenza kwenhliziyo nemithambo yegazi
Enye yezinto eziphawuleka futhi ezibaluleke kakhulu ze-apple cider uviniga amandla ayo ukumisa ukukhula koshukela wegazi ngemuva kokudla. Ukuthatha uviniga lapho udla noma ngaphambi kokudla kakhulu kuthuthukisa ukuhamba kwegazi kuya emisipha futhi kukhuphumele ukuphuma kweglucose kumaseli emisipha.
Njengomphumela wesenzo seviniga, ushukela wegazi, amazinga e-insulin kanye ne-triglyceride awakhuphuki ngemuva kokudla okusheshayo noma okuphezulu ngokungathi ngeviniga.
Lo mphumela ubonakala kakhulu ngemuva kokudla okunama-carbohydrate angagayeka kalula.
Lapho uthenga lo mkhiqizo, kubalulekile ukuba unake ukwakheka kwawo. Ezimweni kuphela lapho uviniga uthengiwe ngaphandle kwezengezo, ungathola imiphumela ebonakalayo futhi ungalimazi impilo yakho.
Noma kunjalo, noma usebenzisa i-apple cider uviniga yemvelo ngokuphelele, kunezindlela eziningi zokuphikisana nokuzisebenzisa.
Okokuqala, ukuba khona kwezifo ezahlukahlukene zomgudu wesisu okuhambisana ne-acidity ephezulu. Lokhu kufaka phakathi i-gastritis, ulcer esiswini, i-Reflux esophagitis, i-colitis nabanye.
Okwesibili, ukwehluleka kwe-hepatic ne-renal.
Okwesithathu, i-hepatitis yama-etiologies ahlukahlukene, i-cirrhosis, i-pancreatitis ye-biliary.
Okwesine, amatshe ezinso kanye nesinye.
Ukunakekelwa kumele kuthathwe ezinconyweni zabathile ama-herbalists kanye nezindlela zokupheka eziphakamisa ukuthatha uviniga we-apple cider ngobukhulu obukhulu. Ezimweni lapho kunokuhlukunyezwa kwe-acetic acid nokuphuza kwayo ngamanani ngokweqile, umphumela ongemuhle ezithweni zangaphakathi zomuntu uyabonakala.
Nakanjani, ngaphambi kokusebenzisa ama-tinctures ne-apple cider uviniga, kunconyelwa ukubonana nodokotela ongabheka imibandela ethile yangasese.
Kunokubuyekezwa okuningi okuhle okuvela kulabo abazama ukusebenzisa uviniga ukunciphisa i-cholesterol yegazi nokuqothula ama-cholesterol plaque. Ukusetshenziswa kukaviniga kuzokwehlisa isisindo ngokweqile, okubalulekile hhayi kubantu abanesifo sikashukela kuphela.
Ngaphandle kweviniga ye-apula cider, uviniga webhalsamu, osekhulile ngemiphongolo eyenziwe emiphongolweni, nawo usungulwe kahle .. Uviniga webhalsamic yiwo ojabulisa kakhulu, onokunambitheka okuhlukahlukene futhi okubizayo phakathi kwamaviniga okudla. Ngendlela yokulungiselela kwayo, ihluke kakhulu kuviniga wokudla ojwayelekile, noma kunjalo, ukuyithatha ngezinga elithile futhi kuthinta kahle izinga le-cholesterol egazini futhi kusiza ukuthuthukisa isimo semithambo yabantu.
Ngakho-ke, izinzuzo zezempilo ze-apple cider uviniga zibaluleke kakhulu, futhi ngenxa yalokho, phakathi kwawo wonke amakhambi emvelo, amukeleka kakhulu. I-Apple cider uviniga ingadliwa, kepha ngobuningi obuthile futhi bayiqaphele imithamo kanye nemithi kadokotela.
Izinzuzo nokulimala kwe-apple cider uviniga kuchazwe kuvidiyo kule ndatshana.
Kungani kukhuphuka i-cholesterol?
I-cholesterol ephakeme noshukela wegazi izifo ezinkulu namuhla. Zithandwa kakhulu kangangokuba cishe wonke umuntu wesibili emhlabeni ulwa nemiphumela yalokhu kugula. Ngenhlanhla, kunezindlela eziningi zemvelo zokuhlanza igazi lalezinto ezinobungozi. I-Apple cider uviniga ukwehlisa i-cholesterol noshukela kungenye yezindlela ezinhle kakhulu!
I-cholesterol ephezulu noshukela yizinto ezimbili eziyingozi kakhulu emizimbeni yethu ezithinta ngqo impilo yesistimu yokujikeleza kwegazi futhi iphazamise imisebenzi yezitho eziningi zangaphakathi.
Thola ukuthi uviniga we-apple cider uthinta kanjani i-cholesterol nokuthi isiza kanjani ukugcina ushukela wegazi ojwayelekile. Ngenxa yendlela elula elula, engokwemvelo, ungayithuthukisa kakhulu impilo yakho ngesikhathi esifushane!
Ukugcina izinga elifanele le-okuthiwa cholesterol enhle (HDL) kubalulekile ekuvikelweni kwezifo zenhliziyo (isifo sokuqina kwemithambo yegazi nezinye izifo ezithinta inhliziyo).
• Ukudla okungenampilo nokunamafutha amaningi
• Ukhuluphele ngokweqile kanye nokukhuluphala
• Ukusebenzisa kabi utshwala nokubhema
Njengomthetho, i-cholesterol isiyonke ingahlukaniswa kube izingxenyana ezimbili: okuhle nokubi. Ukuze umzimba usebenze ngokufanele, kubalulekile ukuqinisekisa ukulingana okuhle phakathi kwabo.
Uma ingxenyana ye-cholesterol embi ama-predomine emzimbeni, ama-plaque aqala ukwakha emithanjeni yegazi, okuyimbangela yezifo ezinkulu zenhliziyo.
Izinga le-cholesterol embi landa ngokunyuka kokudla okuqukethe amafutha angenampilo we-trans. Umthombo wazo ikakhulukazi yinyama ebomvu, ukudla okuthosiwe, amakhekhe namakhukhi, njll.
Izimpawu ze-Cholesterol ephezulu
Yize izifo ezihlangene nemithambo yegazi bezilokhu ziqhamuka eminyakeni edlule futhi zivame ukunganiki zimpawu ezithile, ungabona izibonakaliso eziningi ukuthi umzimba wakho ngeke ukwazi ukubhekana nokususwa kwe-cholesterol noshukela:
Ukuvuvukala nokuqina kwamalunga
• Isiyezi nobuhlungu bekhanda
• Umuzwa wesisindo esiswini nokugayeka
• Ubuthakathaka nokukhathala okungamahlalakhona
• Izinkinga zesikhumba.
Khumbula ukuthi ungabheka i-cholesterol yakho ngokuhlolwa kwegazi. Odokotela batusa ukukwenza okungenani kanye njalo eminyakeni emihlanu. Okunye ukutusa ngaphandle kwawo akunakwenzeka ukwehlisa i-cholesterol yegazi kungukudla okunempilo okunokuqukethwe kwamafutha amancane.
Izinga elifanele le-cholesterol kumuntu omdala lingaphansi kwe-100 mg / dl. Hlola njalo futhi uqaphe impilo yesistimu yenhliziyo!
IGlucose - eyaziwa ngokuthi ushukela - ingumthombo oyinhloko wamandla wamaseli omzimba wethu. Lolu hlobo loshukela lukhona ezinhlobonhlobo zezitsha nemikhiqizo, kufaka ufulawa, uju, izaqathe, ilayisi, njll.
I-glucose iyadingeka emisebenzini eminingana ebalulekile, njengokugaya, ukupompa igazi enhliziyweni, ukuphefumula, ukucabanga, njll. Amazinga kashukela egazi ajwayelekile aphakathi kuka-70 no-110 mg / dl. Uma aludluli lolu luhla lwamanani, umzimba wethu usebenza ngokufanele futhi impilo ayinasengozini.
Futhi, uma leli zinga liphezulu kunokwejwayelekile, sikhuluma ngenkinga ebizwa nge-hyperglycemia, esongela ukukhula kwesifo sikashukela. Lesi sifo senzeka lapho ama-pancreas engakwazi ukukhiqiza i-insulin eyanele, yona elawula izinga le-glucose egazini.
Izimpawu Zoshukela Omkhulu
Ngezansi Uhlu lwezimpawu ezivame kakhulu ezihambisana neglucose ephezulu yegazi:
• Umlomo owomile nokoma
• Izinguquko zemood ezihlala zivela
• Ubuthakathaka kanye nokuzela
• Ukupholisa amanxeba okulimala
Thola izimbangela ezivame kakhulu ze-glucose ephezulu yegazi. Lokhu kufaka phakathi, kepha akupheleli ku:
• Ukucindezela - ngokuxineka okuqinile kwemizwa nokuxineka, ukukhiqizwa okukhulayo kwama-hormone kuyabonakala, okuholela ekwandeni koshukela wegazi
• Ukudla okugcwele ama-carbohydrate
• Indlela yokuphila yokwehlisa ukuthula
• Ukuntuleka kokuzivocavoca umzimba
Imiphumela emibi yemithi ethile (efana nama-steroid, ama-antipsychotic)
• Izifo eziholela ekwandeni kokukhiqizwa kwama-hormone akhulisa ushukela wegazi
Zombili i-cholesterol noshukela zinomsebenzi wokubhujiswa okukhulu komzimba wethu.
I-Apple cider uviniga ukwehlisa i-cholesterol noshukela - isetshenziswa kanjani?
Bheka iresiphi yethu yezempilo emnandi! Ngokufaka uviniga we-apple cider ekudleni kwakho kwansuku zonke, ungahlanza imithambo yegazi yakho yama-cholesterol deposits futhi, ngokwemvelo, wehlise izinga lakho ushukela.
Ngabe u-apple cider uviniga ubhekana kanjani ne-cholesterol ne-glucose eyeqile? Lo mkhiqizo wemvelo ugcwele izakhi zezempilo ezibalulekile (i-potassium, i-pectin, i-malic acid, i-calcium), elihlanza ngokuphelele igazi futhi libuyisele impilo yohlelo lwezinhliziyo nezinye izitho zomzimba.
Ngabe i-apula cider uviniga ilungele ini?
• Ngokwandisa izinga le-nitric oxide emzimbeni, kuvimbela ukuncipha kwemithambo yegazi
• Ihlaziya umzimba, ibuyise ibhalansi efanelekile ye-cholesterol
• Kuyasiza ukugcina isisindo somzimba esijwayelekile (kuncibilikisa amafutha)
• Kushukumisa ukuhlanzwa komzimba ubuthi nezinye izinto eziyingozi
• Ihlanza amathumbu amakhulu, ngakho-ke ithuthukisa uhlelo lokugaya ukudla futhi ivimbele ukuqunjelwa
• Ilawula imisebenzi yohlelo lwe-lymphatic, oluthuthukisa ukuhamba kwegazi futhi luvimbele ukugcinwa kwamanzi emzimbeni kwezicubu zomzimba
• Yehlisa umfutho wegazi, kanye ne-cholesterol ne-triglycerides
• Izipuni ezi-3 zikaviniga wemvelo we-apple cider uviniga (45 ml)
• 1 inkomishi yamanzi (250 ml)
• Hlanganisa uviniga we-apple cider namanzi. Phuza kathathu ngosuku.
• Ukugcina imiphumela nezinhloso zokuvimbela, udinga ukuphuza kanye ngosuku.
Phambilini, izindawo eziphambili ze-apple cider uviniga zaqanjwa.
Imizimba yethu ithola i-cholesterol ekudleni esikudlayo. Noma empeleni, cholesterol ekhiqizwa isibindi yanele izidingo zomzimba futhi asidingi ukuyithola ngaphandle. I-HDL kufanele ibe ngaphezulu kuka-60 mg / dl. Amazinga we-HDL ngaphansi kwe-40 mg / dl akhulisa kakhulu ubungozi besifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi. I-LDL kumele ibe ngaphansi kwe-100 mg / dl njalo. Izinga le-LDL elingu-130 kuye ku-159 mg / dl libhekwa njenge- “lineline high ”futhi izinga elingaphezulu kuka-190 mg / dl libhekwa njengeliphezulu kakhulu. I-cholesterol ephelele ayifanele idlule ku-200 mg / dl.
Isilinganiso se-HDL / LDL (esingabalwa ngokuhlukanisa ukuqoqwa kwe-HDL ku-mg / dl (milligrams nge-deciliter) ngokuhlushwa kwe-LDL ku-mg / dl) kufanele kube ngaphezulu kwe-0.4, kepha noma isiphi isilinganiso esingaphezulu kwe-0.3 sithathwa njengobubanzi obujwayelekile. uhla lwamazinga e-cholesterol. Uma uhlose ukusebenzisa i-apple cider uviniga ukwehlisa i-cholesterol yakho yegazi, ungasibala lesi silinganiso ngoba sizokusiza ekutholeni ukuthi ngabe u-apple cider uviniga wasebenza noma cha. Ungangehlisa i-cholesterol ngaphandle kosizo lwemithi uma ulandela ngokweqiniso izincomo zokunciphisa ukugcwala kwalesi sakhi emzimbeni.
Umphumela we-apple cider uviniga ku-cholesterol
Hhayi nje kuphela umuthi wendabuko ngazo zonke izindlela ezingafani nhlobo ukusetshenziswa kwe-apula cider uviniga ukwehlisa i-cholesterol. Ama-Dietitians, wona, aqaphela umphumela omuhle wesamba esincane somkhiqizo wama-apula ku-lipid metabolism.
I-Acetate kusuka kuma-apula ivuselela amathumbu, ngaleyo ndlela isheshise ukumbiwa kwemikhiqizo ye-metabolic. I-acetic acid ingaphula amafutha amaningi, ngaleyo ndlela inciphise ama-cholesterol plaque.
I-Apple cider uviniga inezinhlobonhlobo zezinto ezizuzisayo, ezifana:
Amavithamini B1, B6, C, E, A,
I-Acetic ne-lactic acid, kanye ne-oxalic ne-citric,
Amaminerali: isibabule, i-phosphorus, i-magnesium, i-iron, i-silicon,
Ama-amino acid ayi-16.
IBeta-carotene, noma uvithamini A, ibambezela ukumuncwa kwe-cholesterol ngumdwebo wamathumbu. Ngokuhambisana, i-carotene ivimba ukukhiqizwa kwama-lipid, ngaleyo ndlela kuvimbele ukunqwabelana kwe-cholesterol egazini.
Ngenxa ye-pectin, eyingxenye yomkhiqizo wama-apula, ukuqina kwemithambo yegazi kuyathuthuka, kuyilapho inani le-cholesterol "elibi" lehlisiwe. Le polysaccharide prophylactically ithinta zombili ukwenzeka kwe-atherosulinosis yemithambo kanye nokwenzeka komfutho wegazi we-arterial.
Umphumela we-antioxidant womkhiqizo we-apula uvuselela isibindi ukusheshisa ukuqeda ubuthi emzimbeni, kanye nokuhlanza amaseli wesibindi uqobo.
Ungayithatha kanjani uviniga we-apple cider we-cholesterol
Akukho mehluko owodwa ekusetshenzisweni kwalesi sengezo sokupheka ukulwa ne-hyperlipidemia. Indlela elula elula iyi-isipuni esisodwa sikaviniga engilazini yamanzi afudumele. Ukuphuza uviniga amanzi kungcono ngaphambi kokudla kwasekuseni. Ungafaka futhi isipuni soju. Ukwehlisa izinga lama-lipids egazi, kufanele uphuze njalo isiphuzo esinjalo, mhlawumbe okungenani amaviki ayi-7.
Ungalungiselela i-tinather ye-antiatherogenic kagalikhi noviniga. Ukuqala, uthele cishe amagremu angama-50 we-clove wegalikhi oqoshiwe ku-100 ml kaviniga. Bese ugcizelela izinsuku ezingama-3-4. Kunconywa ukuthatha amaconsi e-tincture ayi-10-15 afakwe isipuni samanzi, kungabi ngaphezu kwezikhathi ezintathu ngosuku. Kungcono ukunciphisa umkhawulo wezinsuku eziyi-15.
Ukuze ungalimazi i-enamel yezinyo ngobuningi be-acetic acid, kunconywa ukusebenzisa utshani bokuphuza noma hlamba umlomo ngemuva kokuphuza.
Ungafafaza i-apula elincane ngesaladi yemifino elula. Imifino kanye nama-apple element ndawonye kunomthelela omuhle esimweni se-lipid, kwehlisa izinga lamazinga aphansi we-lipoprotein.
Contraindication kanye nokulimala okungenzeka
Kuyathengiswa kukhona uviniga wemvelo we-apple cider. Khetha esitolo kungokwemvelo ngaphandle kwezengezo. Njengoba kunguye kuphela ongaletha izinzuzo ezinkulu emzimbeni. Yile nhlobonhlobo eyenziwe ngama-apula angempela ngaphandle kokusebenzisa ukunambitheka, ngokungafani nokwenziwa, lapho izithasiselo zamakhemikhali zikhona ngokweqile.
Ukuze uvikele ukulimala kwezinye izitho nezinhlelo ngesikhathi sokuphathwa uviniga we-hypercholesterolemia, imithetho yokuthatha uviniga kufanele ibhekwe:
Funda ngokucophelela ukwakheka kwelebula, sebenzisa kuphela umkhiqizo wemvelo ngaphandle kodayi nezinye izithako ezingeziwe,
Xwayani ngezifo ezikhona,
Hlala ususele umkhiqizo ngamanzi ukuze ungavumeli ukushiswa kwe-mucosa esiswini,
Vikela i-enamel yezinyo ngokuhlanza noma ngokuphuza utshani,
Gcina uketshezi esitsheni sengilazi, ngakho-ke impilo yeshelufu cishe ayinamkhawulo.
Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo kufanele aziswe ngokusebenzisa kwakho uviniga. Njengoba incintisana nezifo zomgudu wesisu, obangela ukwanda kwe-acidity yesisu, i-microtrauma nezilonda emgodleni womlomo.
I-Apple cider uviniga ingumkhiqizo otholakala kalula ophikisana ne-hyperlipidemia. Qaphela, ngoba uviniga ngokusetshenziswa ngokweqile ngenxa yokugcwala kakhulu kwe-acid kungavusa izinkinga zezifo zokugaya ukudla. Kuyafaneleka ukukhetha umkhiqizo wemvelo ngaphandle kokungcola, ngoba kuphela unamandla okuphilisa weqiniso.
Ukuvimbela i-cholesterol ephezulu yegazi kuyasiza
ukufakwa ekudleni kwemikhiqizo yobisi ephansi emafutheni,
ukusetshenziswa kwamafutha aphilile ngezilinganiso ezifanele,
ukwenqaba inyama enamafutha (ukudla inyama enamafutha) nokudla okuthosiwe,
ukungadli kokudla okune-cholesterol eningi, njengeqanda isikhupha.
Ungayisebenzisa kanjani i-apple cider uviniga ukwehlisa i-cholesterol?
I-Apple cider uviniga yikhambi lasendulo eliphelele lokulwa ne-cholesterol elengisiwe. Odokotela be-Ayurveda abavela eNdiya yasendulo nabaseGibhithe lasendulo bakhuluma ngezakhiwo zayo eziningi ezizuzisayo. Babewusebenzisa ekwelapheni izifo ezahlukahlukene, ngoba babazi ukuthi kuthuthukisa ukuhamba kwegazi liye kwizitho ezahlukahlukene nokusakazwa kwegazi lilonke. I-Apple cider uviniga itholakala ngokufaka ujusi we-apula. Ngenxa yale nqubo, kwakheka i-apple cider equkethe utshwala, okuthi, ngemuva kokusebenzisana kotshwala ne-oksijini, iguqulwe i-acetic acid.
I-acetic acid ene-apple pectin iyisisekelo se-apple cider uviniga, equkethe ama-amino acid angaphezu kwama-50, amaminerali anjenge-magnesium, potassium ne-calcium, amavithamini ne-beta-carotene.
Leviniga igxilisa (i-dilutes) i-cholesterol, amafutha, i-mucus, kanye nama-deposits emithanjeni yegazi namajoyinti, okungadala izinkinga ezinkulu zempilo. Ngakho-ke, inkulumo ethi "i-apple cider uviniga we-cholesterol ephezulu" ibalulekile uma kukhulunywa ngezindlela zokulawula amazinga e-cholesterol yegazi.
Ukushintsha umsoco, ungasusa kuze kufike ku-30% we-cholesterol engafuneki emzimbeni. Ukudla okubandakanya ukudla okwehlisa imvelo ukugcotshwa kwe-cholesterol emzimbeni kuyindlela engcono kakhulu yokulawula izinga lale nto esegazini. I-Apple cider uviniga isiza ukwehlisa leli zinga futhi ngenxa yalokho kufanele ifakwe ekudleni okunjalo.
Isipuni seviniga enjalo esinenani elincane loju ukunambitheka, ngokudla nsuku zonke, sinomphumela omuhle kakhulu ku-cholesterol yegazi. I-Apple cider uviniga ingasetjenziswa esikhundleni seviniga emhlophe yokupheka, njengoba ukunambitheka kokudla kungashintshi kulokhu. Amazinga akho e-cholesterol azophinde abe phakathi kwebanga elivikelekile nelinempilo.
I-Apple cider uviniga futhi isiza ukunciphisa ngokwemvelo ukunciphisa isisindo nokunciphisa izinhlungu ezihlangene.
I-Apple pectin, i-fiber encibilikiswa ngamanzi etholakala ku-apple cider uviniga, idonsa amafutha kanye ne-cholesterol. Kuyasiza ukuqeda lezi zinto ezingafuneki futhi kusiza ukwehlisa izinga labo. Njengoba wazi, isibindi sidlala indima ebalulekile ezinqubweni ze-metabolic. Uma ukudla okudliwayo kungenziswanga kahle, lokhu kuholela ekuzuzeni isisindo. I-Apple cider uviniga ithuthukisa ukugaya ukudla okunamafutha. Kuyasiza ukusheshisa i-metabolism yamaprotheni, amafutha nezinye izinto ezikhona ekudleni. Ngakho-ke, ngandlela thile, kunomthelela ekwehliseni isisindo. Ngakho-ke, izinzuzo zezempilo ze-apple cider uviniga zibaluleke kakhulu, futhi ngenxa yalokho zihamba phambili kunazo zonke amakhambi emvelo.
I-Apple Cider Vinegar Slimming Supplements etholakalayo njengamanje. Lokhu uviniga kungumkhiqizo ojwayelekile futhi odla kalula. Ngakho-ke, uviniga we-apple cider uthathwa njenge-panacea yezinkinga nge-cholesterol, ngakho-ke abantu emhlabeni wonke bazohlala beyithanda.
I-Apple cider uviniga iqukethe okungenani izinto ezingamashumi ayisithupha eziphilayo.
- Isibonelo, i-potassium iyakhuthaza kuqinisa izicubu zenhliziyo, kubuye kube ngcí kwegazi, kususe uketshezi oluningi emzimbeni,
- I-beta-carotene (uvithamini A wakheka kuyo) ivikela amaseli kusuka kumonakalo wama-radicals wamahhala, kanye nomzimba - kusukela ekugugeni ngaphambi kwesikhathi,
- i-boron idlala indima ebalulekile ekulondolozeni uhlelo lwamathambo,
- I-calcium ihlinzeka ngokudluliselwa kwezifiso zezinzwa namandla emithambo,
- Ama-enzyme ukusiza ukugaya ukudla
- Insimbi ihlinzeka ukulethwa komoya-mpilo esitokisini ngasinye,
- ama-organic acid vusa ukukhululeka kwamajusi we-gastric ukuqinisekisa inqubo yokugaya ejwayelekile, njll.
Ngenxa yokwakheka okunothe kanjalo, i-apple cider uviniga inconywa ukuba idliwe:
- ukuvikela umdlavuza (kuvimbela ukwakheka kwamangqamuzana abulalayo), isifo sikashukela (kuvamisa ushukela wegazi),
- Ukuhlanza umzimba (ususa ubuthi emzimbeni),
- Thuthukisa umzimba (kusiza ukumuncwa kwezakhamzimba),
- ukulwa nokukhuluphala (igqugquzela ukwephulwa kanye nokuqothuka kwamafutha amaningi, kunciphisa umuzwa wokulamba),
- futhi futhi ngenhloso ye ukuqinisa ukungatheleleki kanye nokuvimbela umkhuhlane nezifo zegciwane.
Izazi ze-Gerontologists zeluleka abantu asebekhulile ekuseni ukuthi baphuze ingilazi yesiphuzo seviniga-uju ukuze babuyisele amandla futhi bandise amandla.
AMAREKHODI OKUPHILA KUSUKELA EKUFUNDAZINI OKUFANELE
Sinikeza izindlela zokupholisa i-apple cider uviniga kwezinye izifo ezivamile.
Allergy Izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokuqala kwesifo okulindelekile, aqala ukuthathwa ngomlomo amahlandla ama-2 ngosuku, ekuseni nakusihlwa, inkomishi eyodwa ye-apple cider uviniga solution ngokufakwa kwe-1-2 tsp. uju.
Ubuhlungu obuhlangene. Ezinyangeni ezi-1-2, isixazululo seviniga ye-apula cider sithathwa ngomlomo amahlandla ama-3 ngosuku, ingilazi eyodwa ngaphambi kokudla. Ngemuva kokuqala kokuthuthuka, kunconyelwa ukunciphisa inani lesisombululo esisetshenzisiwe enkomishini eyi-1 ngosuku.
Uma ufisa, kungafakwa ku-1-1.5 tsp kuyo. uju olukhanyayo. Ngaphezu kwalokho, ungazesula izingxenye zomzimba ezinesifo ngesisombululo se-apple cider uviniga (1 uviniga 1 kumanzi ayi-1) kuze kube yilapho isimo sithuthuka.
Ukusula kungenziwa izinyanga eziyi-1-2 ngamakhefu njalo ezinsukwini eziyi-10 ngezinsuku ezingama-2-3.
Imithambo ye-Varicose. Nsuku zonke, ngaphambi kokulala, sula uviniga we-apple cider ngezingxenye zomzimba ezinamathambo ahlanganisiwe. Ngaphezu kwalokho, izikhathi ezi-2 ngosuku, ingilazi eyi-1 yesisombululo esifudumele esilungiselelwe ngokuxuba amanzi abilisiwe kanye ne-1-3 tsp kuthathwa ngomlomo. i-apula cider uviniga.
Ubuhlungu bekhanda. Ukwelashwa kwezinhlungu zekhanda ezithambile kodwa ezivame ukuvela, thatha i-1-2 tsp nsuku zonke. apula cider uviniga buhlanjululwe emanzini.
Ngobuhlungu bekhanda obunzima, i-inhalation yenziwa. Thela u-0,5 l wamanzi no-0,5 l weviniga ye-apula cider ezitsheni ezingenamafutha. Ingxube ebangelwa ibilisiwe. Isixazululo esishisayo sisuswa emlilweni ngaphandle kokupholisa, bese uthambisa kancane umphunga kuze kuphele ikhanda.
Umfutho wegazi ophakeme. Isixazululo sansuku zonke sithathwa ngomlomo, silungiswa kusuka enkomishini e-1 abilayo amanzi no-2 tsp. i-apula cider uviniga.
Ngaphezu kwalokho, ukwehlisa izinga lokucindezelwa kwegazi, udinga ukufaka amanzi ithawula lekotini kuviniga we-apple cider, uwubeke phansi (ngemuva kokumboza phansi nge-polyethylene) bese ubeka izinyawo zakho kuyo, inqubo ihlala imizuzu eyi-10.
Izifo zokukhunta. Nsuku zonke, kaningana ngosuku, isikhumba esithintwe isikhunta simunyiswa ngeviniga ye-apple cider emsulwa. Ngaphezu kwalokho, amasokisi kakotini aminyaniswa ngesisombululo se-50% seviniga ye-apula cider, efafiyisiwe abekwe.
Ukuze uthuthukise umphumela wokwelapha kumasokisi wekotini, kufanele ufake ngaphezulu amasokisi woboya. Isikhathi senqubo sinqunyelwe ngesikhathi esithathayo ukomisa amasokisi ofakwe uviniga.
I-Urolithiasis. Nsuku zonke, izikhathi ezi-3 ngosuku (ekuseni, isikhathi sasemini nakusihlwa) thatha inkomishi e-1 ngaphakathi kwesixazululo esijwayelekile se-apple cider uviniga. Ukwelashwa kwenziwa kuze kube yilapho amatshe enyamalala ngokuphelele.
Ama-cramps, ama-cramp, ama-nat. Izikhathi ezi-2-3 ngosuku kufanele zithathwe ngomlomo izinkomishi ezi-1-1.5 zesisombululo esivamile se-apula cider uviniga oxutshwe ne-1 tsp. uju. Ukwelashwa kungaqhutshwa izinyanga eziyi-1-2.
Amehlo amanzi. Thatha i-1 tsp. uviniga we-cider engilazini yamanzi, engeza 1 ithonsi le-iodine. Phuza kanye ngosuku amasonto ama-2. Bese kuphela ngoLwesibili nangoLwezine.
Burns. Ngokushesha ngemuva kokuthola ukushiswa, faka ucezu lwendwangu yemvelo olunyazwe uviniga endaweni elimele. Gcina kuze kube yilapho izinhlungu ziphela.
I-Apple cider uviniga ingenye yezindlela ezinamandla kakhulu zokulwa nokushiswa futhi ivimbela ukwakheka kwamabhulawu nezinye izinkinga.
Khetha umthamo we-apple cider uviniga ngawodwana, isiphuzo kufanele sibe mnandi kuwe futhi singabangeli ukungahambi kahle ohlelweni lokugaya ukudla.
Ngemuva kokudla uviniga we-apple cider, kuyadingeka ukuhlamba umlomo wakho ngamanzi asobala ukuze izinsalela ze-acid zingabhubhisi koqweqwe lwawo.
I-Apple cider uviniga i-contraindication kubantu abane-acidity ephezulu, kanye nasezigulini ezinezilonda zesisu kanye ne-duodenal ulcer. Ngaphambi kokuqala ukululama uviniga we-apple cider, thintana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo.